Mpivarotra atiny: Atsaharo ny fivarotana + Atombohy ny fihainoana | Martech Zone
Mpivarotra atiny: Atsaharo ny fivarotana + Atombohy ny fihainoana
Alakamisy, Desambra 4, 2014 Kelsey Cox
Tsy asa mora ny mamorona atiny tena tian'ny olona vakina, indrindra fa ny atiny dia faritra iray manjaka hatrany ny kalitao noho ny habetsahana. Amin'ireo mpanjifa tototry ny atiny be dia be isan'andro, ahoana no ahafahanao mampiavaka anao mihoatra ny ambiny?
Ny fandaniana fotoana hihainoana ny mpanjifanao dia hanampy anao hamorona atiny izay mifanaraka amin'izy ireo. Raha 26% ny mpivarotra no mampiasa ny hevitr'ireo mpanjifa hibaiko ny paikadin'ny votoaty, 6% ihany no nanatsara an'ity fomba ity. Ny atiny dia tokony hiorina amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa mifototra amin'ny fikarohana, toy ny fanadihadiana sy ny dinidinika. Anontanio ny mpanjifanao raha hitany fa misy dikany ny atiny ary aza adino ny mihaino. Ny varotra dia maharitra fotoana fohy, fa ny fifandraisan'ny mpanjifa dia mety haharitra mandritra ny androm-piainany. Ao amin'ny sary eto ambany, Captora jereo ny toerana tsy ananan'ny marika mpivarotra atiny maro ny marika sy ny fomba hanovan'izy ireo ny lalao hitondrany ny orinasa tadiavin'izy ireo.
Tags: Content MarketingSary torohay-barotraMarketing Infographicsmarketing ara-tsosialySocial Media Marketing
Ireo antony tsy famandrihan'ny olona ny mailakao (sy ny fomba hampihenana ny famandrihana)
Antony 5 hanamarinana ny fandraisana mpiasa maso ivoho nomerika